सन्दीपको टिमविरुद्ध पारसआवद्ध आबुधाबीको खराब सुरुवात - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः यूएईमा जारी टी–१० लिग अन्तर्गत ‘सुपर लिग’को अन्तिम खेलमा सन्दीप लामिछानेआवद्ध कर्नाटक टस्कर्सविरुद्ध पारस खड्का सम्मिलित टिम आबुधाबीले खराब सुरुवात गरेको छ ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको आबुधाबीले पहिलो ओभरमै महत्वपूर्ण विकेट गुमाएको छ ।
आबुधाबीले पहिलो विकेटका रुपमा विस्फोटक ब्याट्सम्यान अभिश्का फर्नान्डोलाई ३ रनमा गुमाएको हो । उनलाई कर्नाटकका नथन रिमिङटनले ‘क्याच आउट’ गराए ।
याे पनि पढ्नुस दिल्ली क्यापिटल्सको नजरमा सन्दीप..? फेरि लेख्यो यस्तो!
‘सुपर लिग’को अन्तिम खेलमा कर्नाटक र आबुधाबीले प्लेइङ ११ मा २–२ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ ।
कर्नाटकले आज सन्दीप लामिछानेलाई विश्राम दिएको छ । उनको स्थानमा फास्ट बलर प्याट ब्राउनलाई मौका दिइएको छ ।
यता आबुधाबीले भने पनि आफ्नो अन्तिम खेलमा २ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । पछिल्ला खेलमा लगातार प्लेइङ ११ मा नपरेका नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई बुधाबी मौका दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपले भने– म नै नम्बर वान हुँ !
यो संस्करणको ‘प्ले अफ’मा मराठा अरबियन्ससहित कलन्दर्स, बंगला टाइगर्स र डेक्कन ग्लाडियटर्स पुगेका छन् ।
नर्थन वारियर्स, दिल्ली बुल्स, टिम आबुधाबी र कर्नाटक टस्कर्स भने यो सिजनको टी–१० को ‘प्लेअफ’ पुग्न असफल भए ।
ट्याग्स: कर्नाटक टस्कर्स भर्सेस टिम आबुधाबी, टी-१० क्रिकेट लिग, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने